Fihosana lafaoro sy kojakoja
Ny vokatray dia amidy amina marika telo malaza be dia be: YANGLI, GERISS, HIFEEL. Izy ireo dia rafitra vatasarihana, sary miafina, sary mihetsika Ball, Slide amin'ny latabatra, bisikileta nafenina, tanany, vazaha vita amin'ny lafaoro ary kojakojam-pitaovana fanaka hafa, izay ampiasaina amin'ny fanaka, lalimoara, fitaovana ao an-trano sns ...
37-230 mm Fanitarana feno amin'ny ...
Stainless vy 430 toradroa ...
Kitapom-patsy Cooker fatana varavarana ...
Slide Drawm feno-penisotra feno ho an'ny kabinetra tsy misy rafitra
Sarin-tsarimihetsika feno rindrambaiko ambany-fanaka feno ho an'ny valizy tsy misy rafitra - takelaka fisorohana 16mm matetika ampiasaina amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR33A
Torohevitra fanitarana malefaka manakaiky eo ambanin'ilay sary sokitra misy visy sy tsipika azo ovaina
Tselatra fanitarana malefaka akaiky eo ambanin'ny vatasarihana sary mihetsika miaraka amin'ny visy sy tsipika azo ovaina ampiasaina amin'ny valizy ao an-dakozia sy any amin'ny fandroana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR23A
Fanaparitahana feno sisin-dàlana malefaka mihidy fametahana harona-harona
Full Extension Side Mounted Soft Closing Wire-basket Slide matetika ampiasaina amin'ny lakozia lakozia sy fidiovana. Ity karazana harona tariby ity dia mampiasa visy hanamboarana ilay vatasarihana harona. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR33S
Sarina malefaka akaiky eo ambanin'ilay vatasarihana miafina mivalona fanitarana feno miaraka amina sary eo anoloana
Sarina malefaka akaiky eo ambanin'ny vatasarihana takelaka miafina solosaina feno fanitarana miaraka amina sary eo aloha izay matetika ampiasaina amin'ny lakozia ao an-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa fonosana eo aloha hametahana ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR33B
Torohevitra fanitarana malefaka manakaiky eo ambanin'ilay sary hoso-doko miaraka amin'ireo mpampitohy eo anoloana
Toro-hevitra Extension Soft Close Undermount Drawer Slide amin'ny Front Connectors izay matetika ampiasaina amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa fonosana eo aloha hametahana ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR23B
Fanitarana mihantona mihetsiketsika mihidy miafina mihazakazaka mihazakazaka mihazakazaka mihazakazaka miaraka amin'ny fononteny anoloana 3D mazàna ampiasaina amin'ny vata-dakozia sy fidiovana. Ity karazan-tsarimihetsika ambany ambany ity dia mampiasa fonosana eo alohan'ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR33BS
Varotra varimbazaha vita amin'ny varotra any Chine, famarotana mafana, fametahana varavarana lafaoro
Fampidirana: Fantsona lafaoro fandrahoana fatana tokana tokana sisa no ilaozana sy ilany ankavanana dia mpivady 1. Ampiasao amin'ny vavahady ho an'ny varavaran'ny fatana fandrahoan-tsakafo. Ny fitaovana Geriss dia mety amin'ny trano, indostrialy ary koa lafaoro elektrika, indrindra ho an'ny karazana varavarana izay milanja 3 KGS - 15 KSGS mandritra ny folo taona mahery.
37mm Fantsona telegropika feno / triple extension bayonet slide slide
37mm Full / telo heny teleskopika fantsom-bokotra bayonet slide drawer novokarin'ny vokatra famokarana avo lenta sy fitaovana fanandramana vokatra miasa somary mangina sy milamina. Momba ny vatasarihanay mitondra vatomamy dia manana sakany samihafa ho an'ny 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ho an'ny halavany dia azonay atao araka ny takinao ny hamokarana. Raha liana amin'ny fantsom-pifandraisana telesopika izahay dia azafady mifandraisa aminay.
Model No .: YA-3703
37-230 mm Fitaovana feno boaty fampitaovana kabinetra mitondra bayonet mount drawer slide
37-230 mm Fitaovana feno boaty fanitarana kabinetra mitondra bayonet mount drawer slide novokarin'ny vokatra famokarana avo lenta sy ny vokatra fitaovana fitiliana miasa somary mangina sy milamina. Momba ny vatasarihanay mitondra vatomamy dia manana sakany samihafa ho an'ny 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ho an'ny halavany dia azonay atao araka ny takinao ny hamokarana. Raha liana amin'ny fantsom-pifandraisana telesopika izahay dia azafady mifandraisa aminay.
Model No.: YA-37HK-230
37-540mm Double way extension extension bayonet mount ball bear toolbox drawer slide novokarin'ny vokatra famokarana avo lenta sy ny vokatra fitaovana fitiliana miasa somary mangina sy milamina. Momba ny vatasarihanay mitondra vatomamy dia manana sakany samihafa ho an'ny 17mm, 27mm, 35mm, 37mm, 45mm, 51mm, 53mm, 76mm. Ho an'ny halavany dia azonay atao araka ny takinao ny hamokarana. Raha liana amin'ny fantsom-pifandraisana telesopika izahay dia azafady mifandraisa aminay.
Model No .: YA-37HK-540
Fampidirana feno eto ambany amin'ny tendrombohitra PUSH TO OPEN drawer slide miaraka amin'ny fitaovana fanidiana
Feno fanitarana eo ambanin'ny tendrombohitra Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa clip fitaovana fanidiana amin'ny vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR33D
Manosika fanitarana feno hisokatra eo ambanin'ny sary mitsivalana an-tendrontany misy tsimatra azo ovaina
Manosika fanitarana feno hisokatra eo ambanin'ny sary mitsivalana amin'ny vatasarihana misy paingotra azo ovaina ampiasaina matetika amin'ny lalimoara an-dakozia sy fandroana. Ity karazana slide drawer undermount ity dia mampiasa visy azo ovaina ary plugina plastika amina ireo vatasarihana hazo. Manana milina TAIWAI avo lenta, miaraka amina hevitra ambony famolavolana ny ekipa teknika tena tsara anananay ary manamboatra tsara ny fitaovana GERISS tsara tarehy sy préfest izay safidy tsara indrindra amin'ny orinasa fanaka manerantany.
Model No .: EUR33C
Telefaona: + 86-21-66368006
Adiresin'ny orinasa: No.10 Yonghe Road, faritra Renhai Industrial, Leliu Town, Foshan City, Sina.